Xarumaha Daljir Boosaaso Garoowe iyo Galkacyo oo maalintii 12aad sharci darro ugu xiran Puntland. – Radio Daljir
Xarumaha Daljir Boosaaso Garoowe iyo Galkacyo oo maalintii 12aad sharci darro ugu xiran Puntland.
Luulyo 4, 2016 2:12 b 0
(July 04 2016)-Xarumaha Radio Daljir ee magaalooyinka Boosaaso, Garoowe iyo Galkacyo ayaa wali hawada ka maqan kadib markii dowladda Puntland ku xidhay sifo aan sharci ahayn.
Xariga Daljir oo galay maalinkii 12aad ayaa ah mid dowladdu ay wali ka aamusan tahay xilli ay isa soo tarayso cabashada shacabka Soomaaliyeed ee ku taxnaa barnaamijyada iyo wararka ka baxa Daljir.
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya oo lakulmay boqorka wadanka Sucuudi Careebiya.